केपी ओलीसँग क-कसले खाँदैछन् सपथ ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति → केपी ओलीसँग क-कसले खाँदैछन् सपथ ?
केपी ओलीसँग क-कसले खाँदैछन् सपथ ?
October 12, 2015३५० पटक
२५ असोज, काठमाडौं । सोमबार दिउँसो १ बजे शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण गर्दैछन् । राष्ट्रपतिबाट सपथ लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा क-कसलाई सपथ ग्रहण गराउँदैछन् भन्ने यतिबेला चासोको विषय बनेको छ ।
सूत्रहरुका अनुसार सरकारमा ओलीलाई सहयोग गरेका कमल थापा र विजय गच्छदार उपप्रधानमन्त्री बन्नेछन् । एमाओवादीले पनि उपप्रधानमन्त्री पाउने छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा छ भने गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने चर्चा छ ।
एमाओवादीमा भने कृष्णबहादुर महरा र टोपबहादुर रायमाझी दुईजना उपप्रधानमन्त्रीका दाबेदार छन् । एमाओवादीले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने चर्चा छ ।
एमाओवादीभित्र टोपबहादुर रायमाझी, कृष्ण महरा, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्मा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आ-आफ्नो लबिङ गरिरहेका छन् ।
दोस्रो बरियताको उपप्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद पनि विगतमा हुने गरेको छ । केपी ओलीले आफ्नो अनुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुने गरी दोस्रो बरियताको प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउलान् ? कमल थापा, विजय गच्छदार वा एमाओदीबाट ? यो पनि चासोको विषय छ ।
विगतमा सुशील कोइरालाले दोस्रो बरियताको उपप्रधानमन्त्री आफ्नै दलबाट प्रकाहमान सिंहलाई बनाउन खोजेका थिए । तर, एमालेको आपत्तिपछि वामदेव गौतम दोस्रो बरियताको उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
यसपालि ओलीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री आफ्नै दलमा राख्ने हो भने भीम रावललाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो हुँदा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या चार पुग्न सक्छ ।
मन्त्रीमा कोको ?
एमालेबाट तत्काल मन्त्रीको सपथ लिनेमा उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलको नाम चर्चामा छ ।
परराष्ट्र र गृह अन्य दललाई दिनुपर्ने भएपछि भीम रावलले लिने मन्त्रालय रक्षा वा अर्को कुनै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि विगत केही वर्षयता रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैं राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ । अग्नि खरेलले कानून मन्त्रालय सम्हाल्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । विष्णु पौडेलको नाम अर्चमन्त्रीका रुपमा चर्चामा आएको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार सोमबार प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणका बेला मन्त्रालय बाँडफाँडमा सत्ता साझेदार दलहरुवीच सहमति नभएको अवस्थामा एमालेका रावल, पौडेल र खरेल लगायत केहीलाई विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गराइने सम्भना रहेको एमाले स्रोतले बताएको छ ।
केपी ओलीलाई समर्थन जनाएका एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलहरुले पावर सेयरिङका विषयमा सोमबार आन्तरिक र बाह्य छलफल गर्दैछन् ।
साना दलको अपेक्षा
केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाउने साना दलहरुले पनि मन्त्रालयको आश गरेका छन् । तर, माले नेता सीपी मैनाली, राप्रपा नेता दीपक बोहोरालगायत केहीलाई समेटे पनि सबैलाई मन्त्रालय दिँदा ओलीको क्याबिनेट ठूलो हुने सम्भावना छ । बोहोरा मन्त्री बनेमा भ्रष्टाचारको दाग लाग्ने चिन्ता पनि एमाले नेताहरुमा देखिएको छ ।
संसदमा ३३८ मत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका लागि साना दलहरुलाई मन्त्री दिएर फकाइराख्नुपर्ने बाध्यता छैन । किनभने राप्रपा नेपाल र एमाओवादीले समर्थन गर्दासम्म एकदुई सीटे दलहरुले मन्त्री नपाएको रीसमा विरोध जनाए पनि सरकार ढल्ने खतरा छैन ।